#BlackFriday: 'Thenga ngokuzicabangela'
UMKHUBA weRetail Therapy kuthiwa wande kwabesifazane abagqiba ukukhathazeka ngokuyokhithiza izimpahla zokugqoka, okungenzeka bagileke kakhulu ngeBlack Friday
ZANELE MTHETHWA | November 27, 2019
KUNETEMU elisematheni kulezi zinsuku ezinkundleni zokuxhumana, abantu abathi uNovemba usuphenduke uDisemba, okusho ukuthi sebevele basemuzweni wamaholidi kaKhisimusi.
Umuzwa ubonakala ngisho ezitolo njengoba sekuqalile kukhangiswa ngezimpahla zikaKhisimusi. Njengoba ngoLwesihlanu kunendali yodumo lweBlack Friday baningi abalubheke ngabomvu lolu suku ukuze bayokhithiza. Ngaphandle kweBlack Friday kukhona okuthiwa vele banenkinga yomkhuba obizwa ngeRetail Therapy.
Kulo mkhuba umuntu usebenzisa ukukhithiza ezama ukugqiba inkinga anayo noma ukukhathazeka emphefumulweni.
Isolezwe likhulume noNksz Zola Dudeni oyiPsychologist ochaze kabanzi ngalo mkhuba okuthiwa wande kakhulu kwabesifazane.
Uthe umuntu usuke enenkinga angafuni ukuyixazulula bese esebenzisa ukukhithiza ukuyiziba.
“Umuntu usuke ecabanga ukuthi uzothola imfudumalo emphefumulweni uma esethengile. Nokho uma esethengile uyazisola esebona izimpahla angazi ukuthi uzozenzani,” kusho uNksz Dudeni.
Uthe onale nkinga uvame ukuthenga kakhulu izimpahla zokugqoka.
Uveze nokuthi kuyenzeka omunye asebenzise ngisho imali ayibolekile noma athenge ngekhadi lesikweletu uma esengenwe kakhulu yiRetail Therapy.
“Ngabantu abasondelene naye abangabona ukuthi unenkinga. Uyakwazi ukubona umuntu omaziyo uma esethenga ngokweqile. Uma inkinga ibingakagxili kakhulu ingalungiseka ngaphandle kokuthi alulekwe ngokomqondo,” kusho uNksz Dudeni.
UMnuz Francois Viviers, oyi-Executive of Marketing and Communications kwaCapitec, uthe baningi abazogileka ngeBlack Friday okubalulekile wukuthi baqwashiswe. Uxwayise abazokhithiza ngeBlack Friday ukuthi abangazisoli kamuva.
“Kumele uhlele ukuthenga lokhu okudingayo okulingene iphakethe lakho. Kumele ubale imali osele nayo uma usukhokhe zonke izikweletu ubone ukuthi ungakwazi yini ukuthengela iBlack Friday. Nakhona emalini osele nayo kumele wenze uhlu lwezinto ezibalulekile odinga ukuzithenga,” kusho yena.
UViviers uthe abantu kumele bazi amanani ezimpahla ajwayelekile ezitolo ukuze babone ukuthi kukhona yini okwehlisiwe ngeBlack Friday.
Nakhu okunye athe kubalulekile:
* Ungayi esitolo ungawabhekile amanani ezimpahla ngoba ungathenga okungenasidingo.
* Yiba nohlu lwezinto ozidingayo.
* Qhathanisa amanani azo zonke izitolo uthenge lapho kushibhe khona.
* Gwema ukuthenga ngekhadi lesikweletu ngoba lizofakwa inzalo enkulu.
* Thenga ozokudinga kuphela.
* Ungalubhadi ezitolo zendali uma ungayibekanga eceleni imali yeBlack Friday.